Shabakadaha ururada midigta fog oo caan sii noqonaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shabakadaha ururada midigta fog oo caan sii noqonaya
La daabacay tisdag 18 juni 2013 kl 14.03
Wasiiradda Arrimaha Dimoqraadiyadda Birgitta Ohlsson. Sawirle: Anna-Karin Ivarsson/Sveriges Radio.
Shabakadaha midigta fog oo jecel in ay xoog adeegsadaan waxaa maalin walba booqda dad kor dhaafay 144000 oo qof. Haddii la barbardhigo siddeedda xisbi ee baarlamaanka ku jira waxaa shabakadahooda booqda 19000 oo qof maalintii. Sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasad uu guddiga qaranka ee saxaafaddu u sameeyey wasiirada dimoqraadiyadda Birgitta Ohlsson.
Waxaa daraasaddaas ka muuqda in toddoba shabakadood oo taabacsan midigta xagjirta ee xoog-isticmaalka jecel ay si aan qarsoodi ahayn uga furan yihiin Iswiidhen. Saddexda ugu waaweynna waxay kala yihiin Realisten.se, Nationell.se iyo Svenskarnasparti.se.
Wasiiradda dimoqraadiyadda Birgitta Ohlson iyadoo walaac ka muujineysa natiijada daraasaddaan waxay tiri:
- Arrintani waa mid loo baahan yahay in aan la dhayalsan. Kooxahaan midigta xagjirta ah iyo kuwa la magacbaxay xoogga caddaanku muddo dheer ayey soo jireen. Waxay gacansaar dhow la leeyihiin kooxaha ay isku fikirka yihiin oo ka jira Yurub, gaar ahaan waqooyiga Yurub. Waxaana loo baahan yahay in aan si qotodheer u baarno.
Daraasadda waxaa lagu muujiyey in kooxahaani ay astaamo badan iskaga mid yihiin. Fikirkooda waxaa si xooggan ugu dheehan fikirka annaga-iyo-iyaga. Waxaa kaloo ku xoogaan fikirka guud oo oranaya in shirqool loo maleegayo, hadallo ah waan in aan isdifaacnaa, nacayb ay u hayaan wadaxaajoodka iyo buunbuuninta in tallaabo toos ah la qaado.